प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एनसीएचएलसँग आबद्ध : - Nepal Clearing House Ltd: Electronic Cheque Clearing, Interbank Payment System & connectIPS e-Payment System
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एनसीएचएलसँग आबद्ध December-20-2020
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने गरी दुई संस्था बीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेडका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराई र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सन् २००७ जूनमा लक्ष्मी बैंकका साथै विभिन्न प्रतिस्थित व्यवसायिक समूहहरुद्वारा स्थापना गरिएको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेडले इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा आफ्नो पृथक पहिचान बनाउन सफल भइसकेको छ । कम्पनीले एनसीएचएलसँगको यस साझेदारीले डिजिटल इन्स्योरेन्स सेवाहरुमा पनि आफ्नो विशेष उपस्थिति गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
एनसीएचएल नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीज लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनी हो । यसका NCHL-ECC, NCHL-IPS र connectIPS e-Payment प्रणाली सञ्चालनमा रहेका छन् जसमा सबै जसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आबद्ध भैसकेका छन् ।